Ogaden News Agency (ONA) – 7 guuradii Midawga dhalinyarada iyo ardayda Ogaadeeniya (OYSU).
7 guuradii Midawga dhalinyarada iyo ardayda Ogaadeeniya (OYSU).
Posted by Daljir	/ June 27, 2017
Ururka dhalinyarada ee OYSU oo ah urur caan ah kana hawlgala dhamaan dunida dacaleeda meel kasta oo bulshada Soomaaliyeed ku dhaqantahay, isla markaana matala shacabka dulman ee Soomaalida Ogaadeeniya ayaa maanta 7da jirsaday.
Dhamaan dhalinyaradu waxay lahaayeen hal ujeedo oo ay ka midays naayeen balse waxay wateen magacyo kala duwan sida OSF, OSF-SA, OYN, ONA, SOYA IYO MAGACYO KALE.
Ugu danbayntii. Maamulka ururka ee hada jira wuxuu ugu baaqayaa dhamaan dhalinyarada Soomaalida Ogaadeeniya inay ka qayb qaataan hawlaha ururka fuliyaana qorshayaashiisa sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed inay kusoo biiraan urukan oo u taaga jiritaanka iyo difaaca Soomaalinimada dad iyo dalba
Talo saaro Alle kutasho Maalkaaga maskaxdaada iyo Muruqaada.